आज रातीबाट देशैभर लकडाउन हुनसक्ने ! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आज रातीबाट देशैभर लकडाउन हुनसक्ने !
काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढेसंगै पुन: लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे विज्ञहरुबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
करिब ४ घण्टा चलेको छलफलमा सहभागी अधिकांशले पुन: लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भने कतिपयले कडा कदम चाल्दै कर्फ्यु नै लगाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
एक भा,ग्यमानी छोरी जो बाबुको मायामा हु,र्किदै छिन
Breaking: नेपालमा आज पनि एकैचोटी थपिए ५८६ कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या ७१७७ पुग्यो
अर्थमन्त्रीको अर्को राम्रो कदम : अब सरकारी कार्यालयले नयाँ गाडी किन्न नपाउने